Pushkin गरेको कविता रूपमा टोलस्टोय गरेको गद्य रूपमा - हाम्रो सबै! यो तथ्यलाई बावजुद छ कि टोलस्टोय गरेको पाँच मात्र पूर्ण-fledged उपन्यास, मात्र केही दर्जन उपन्यास र ट्रिलजी - "बाल्यकाल। किशोरावस्था। युवा "। कथा, दन्तिये, Fables, कविता, अनुवाद, नाटकीय काम - आफ्नो केही यी कामहरू योग्य कस्तो चिन्दिन। सायद प्राय तिनीहरूलाई सम्झँदा, धेरै नयाँ टोलस्टोय फेला पारेका छौं।
गद्य को लेखक को पहिचान, आफ्नो साहित्यिक शैली
के LVA Tolstogo काम distinguishes - यो लेखक को पहिचान दर्शाउने: एकल सारा "प्राकृतिक कलाकार" र मा coexistence "तर्कसंगत विचारक।" यो तिनीहरूले धेरै वर्ष को लागि रचनात्मक लेखक अणुहरु अनुसन्धानकर्ताहरूले मा विघटित गर्न प्रयास ठ्याक्कै छ। काम एल एन Tolstogo द्वारा - आफ्नो Delights लागि एक गोदाम। अबोध्य तर्क र तर्क को तिर्खा अध्ययन - कलात्मक र दार्शनिक सुरुमा, यी दुई ध्रुवीय शैलीमा एक पूर्ण विसर्जन पाठक गरेको उत्साह पढाइ लागि, लेखक, आलोचकहरु, सार्वजनिक तथ्याङ्कले देखि evoke।
तिनीहरूलाई केही मौलिक विरोध र आफूलाई बीच झगडा, लेखक दुई प्रकारका अवस्थित गर्न आवश्यक छ। आफ्नो काम को पहिलो पहिले नै - "बाल्यकाल र किशोरावस्था" - यसको सबै भन्दा राम्रो मा कल्पना को दर्शन पाठकहरूलाई लियो टोलस्टोय जस्तै प्रतिभा को गद्य लेखक, को अचम्मको सौन्दर्य प्रदान गर्दछ। लेखक को कथा र जो उसलाई ठूलो रूसी लेखक को प्रतिष्ठा दिनुभयो सबै आफ्नो अन्य काम एक अद्वितीय शैली सिर्जना।
LVA Tolstogo को शीर्ष5काम
यो संग शीर्ष 10 यो ठाँउ, शीर्ष 100, "राम्रो कुरा" (यस मामला मा "लेखकले को सबै भन्दा राम्रो पुस्तक") को परिभाषा हाम्रो आधुनिक बर्बाद छ। का लियो टोलस्टोय को सबै भन्दा व्यापक पढिएको कार्यहरू शीर्ष 10 सिर्जना गर्न प्रयास गरौं।
पहिलो दुई उपन्यास मा deservedly दावी - "अन्ना Karenina" र "युद्ध र शान्ति"। हामी प्रत्येकले हामी शीर्ष लाइन मा निर्माण गरेका छन् जसलाई, तिनीहरूलाई को एक पक्षमा आफ्नो तर्क छ। तिनीहरूलाई ल्याउन - यो अनावश्यक छ, र विवाद ढिलाइ हुन सक्छ। हाम्रो शीर्ष परेड हामी पहिलो तिनीहरूलाई दुई स्थान दिन र दोस्रो स्थानमा मा सार्न।
उपन्यास "आइतवार", को ट्रिलजी "बाल्यकाल। किशोरावस्था। युवा ", उपन्यास" Kreutzer सोनाटा, "," बिहान landowner "" एक madman को डायरी "- तिनीहरूले पढ्न, प्रेम र अझै पनि संसारभरि फिलिम र थिएटर निर्देशक द्वारा मांग मा। कथा तेस्रो र उपन्यास ट्रिलजी निर्धारण र दोस्रो मा छोड्नु बुद्धिमानी हुनेछ भने, त्यसपछि पुरस्कार triples पहिले नै टोलस्टोय को सबै भन्दा राम्रो काम सात छ। हाम्रो शीर्ष 10 योग्य बाँकी तीन ठाउँमा हामी "Sevastopol कथाहरू" "Hadji MURAT छ" र नाटकीय काम, कथा को चक्र प्रविष्ट "अन्धकारको शक्ति वा अड्केको पन्जा, को चरा पातालमा छ।"
निस्सन्देह, हाम्रो दर्जन, हामी एल एन Tolstogo को सबै भन्दा राम्रो काम उल्लेख गरेको छ, जो - विषय मा केवल एक प्रतिबिम्ब, तर यो संभावना धेरै पाठकहरूलाई को राय संग एक संयोग यो छ।
"युद्ध र शान्ति" - जसलाई बारेमा र के
दुर्लभ पाठक प्रश्न छैन, र वास्तवमा के हो, एक उपन्यास? बारेमा नेपोलियन विरुद्ध युद्ध राज्य लागि कठिन घटनाहरू एक पृष्ठभूमि विरुद्ध जाँच जुन र stoic साहस र हाम्रो सैनिक, सम्मान र मर्यादा वा मानव सम्बन्धको बारेमा अझै पनि आचरण को साहस को रूसी सेना को heroism?
सिपालु उत्पादन, लेखक लियो टोलस्टोय रूपमा inimitable छ - "युद्ध र शान्ति"! लेखक को प्रश्नको जवाफ खोज्न प्रत्येक पाठक जस्तै प्रदान गर्दछ: - प्रमुख लडाई को एक बयान अक्षरहरू द्वारा अनुभव भावना अद्भुत विवरण मा प्रवेश गर्न चाहने लगभग पूर्ण सही ऐतिहासिक शुद्धता समावेश - युद्ध रुचि छ जो खोजी कि उपन्यास मा फेला पार्न निश्चित छ।
उपन्यास "युद्ध र शान्ति", प्रत्येक अक्षरले मुख्य संग गर्भवती कसरी छ यसको मात्रा, शैली, भाषा, काम को प्रस्तुति, मा अद्वितीय - दैनिक जीवनको आनन्द, कष्ट मा, आनन्द मा। त्यहाँ र त्यसपछि, र अर्को रन समानान्तर, चरण लागि चरण, हात हातमा सबै परीक्षा तथा अवरोध मार्फत। राम्रो, को पाठ्यक्रम, उहाँले जितेकी र दुष्ट पराजित मर्छ।
अन्ना Karenina यसको निर्माता सहानुभूति गरे
"युद्ध र शान्ति", "अन्ना Karenina" मा जस्तै, त्यहाँ दुई ध्रुवीय प्रेम हो:, उदात्त शुद्ध, पापरहित र यसको antipode -, despicable भीषण, लगभग फोहोर। पेट आफूलाई upland को डिग्री निर्णय वा आफ्नो भावना lowland गर्न दिने, "प्रकाश" को मुख मा अन्ना र Vronsky को पाठक व्याख्या सम्बन्ध provokes। लेखक ठोस पर्खाल को परिभाषा बीच निर्माण गर्न खोज्छ, एक राज्य देखि अर्को गर्न संक्रमण नगण्य छ: एउटै लाइनमा हामी पूर्ण अन्य मा, यो प्रेम को औचित्य फेला - यसको विश्वव्यापी निन्दा। र यदि अस्थिर, तर रेखा बीच पुल को - कुनै कुरा के पीठो protagonists, आफ्नो शङ्का, र अन्तिम विकल्प।
त्यसैले के मूल्यांकन आफ्नो चरित्र लेखक आफूलाई दिन्छ? यो सहानुभूति, माफ गर्नुहोस् समर्थन छ? टोलस्टोय यहाँ implacable moralist रूपमा कार्य - कामहरूलाई मा, आपराधिक प्रेम एक दुःखद अन्त गर्न बर्बाद छ। म अरूलाई चेतावनी मार्न उनको बताइरहेका, मेरो चरित्र सिर्जना गर्नुभएको छ। सहानुभूति छ भन्ने छवि, यति धेरै ग्रस्त बनाउन गर्दैन।
टोलस्टोय को प्रमुख काम रूपमा "बाल्यकाल"
लेखकले को कलात्मक सम्पदाको एक प्रमुख स्थान यो कथा लाग्छ। सायद पहिलो काम, एक महान लेखक लियो टोलस्टोय रूपमा नै घोषणा गरेको छ जो - "बाल्यकाल"। छैन पाठक एक वयस्क उहाँले बसोबास जो संसारको देख्नुहुन्छ छ जो, यो घुम्टो लागेको राम्रो र खराब, इमानदारिता र falsehood छैन महसुस सानो मान्छे, को वयस्क समस्या को दुर्गम समझ खोल्छ किनभने। आफ्नो निकोलस पछि पाठक, विद्यालय जान्छ पुरानो, यो विश्लेषण र अन्य मानिसहरूको कार्यहरू, त्यो देख्नुहुन्छ रूपमा विश्व स्वीकार गर्न सिक्न।
केटा नितान्त धूर्त महसुस गर्न सक्ने क्षमता, छल, यी आकर्षक गुणहरू उहाँले आफ्नो बाल्यकाल मा फिर्ता हेर्न र आफ्नो कार्यहरू पुनर्विचार गर्न पाठक जबरजस्ती, आफूलाई ठान्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई आफ्नो भावना। Nikolenka हामी उहाँले बसोबास ती केवल कोसँग, मान्छे प्रेम गर्न सिक्न सक्छन्, तर पनि ती जो उसलाई वा आफ्नो बच्चाको हृदय प्रभावित केहि संग अनुकूल छन्। र कथा भनेर प्रेम नष्ट गर्न सिकाउँछ। कथाहरू - लाइनहरु बीच पढ्न सक्ने क्षमता धेरै उहाँले लियो टोलस्टोय लेखे यो काम, साथै साना गद्य बुझ्न प्रयास गर्ने ती दिन।
विषयहरू Rasskazov LVA Nikolaevicha
चतुर बच्चाहरु र बुद्धिमानी वयस्कहरूको लागि वन्यजन्तु र defenseless जनावर बारेमा। छैन त आफ्नो छोटो कथा मा धेरै, यो सूची मात्र चार दर्जन काम, सबै भन्दा पहिले नै उल्लेख रूपमा, जो को, अपरिचित पाठकहरू को एक विस्तृत दायरा। रूपमा टोलस्टोय गरेको पैतृक छोटो गद्य यस प्रकारको एक सानो थप भाग्य "को बल पछि", "जम्प", "नक्कली कुपन", "बाल्यकाल शक्ति", र, पाठ्यक्रम "राहगीरों-द्वारा संग कुराकानी गर्दै", "Sevastopol कथाहरू" को चक्र।
देखेको 1905 देखि 1909 को लागि कथाहरू को लेखन मा सजिलै देखिने तीव्रता - लियो टोलस्टोय जीवन अन्तिम, उहाँले तपाईंलाई थाहा रूप मा, 1910th मा मृत्यु भयो। साहित्य को अन्य विधाहरू कथा को स्थान बस अवस्थित छैन जो आफ्नो जीवन को एक विशाल अवधि समर्पित थियो। यी काम संसारको यसको गहिराई, जीवन मुद्दाहरू बारेमा छाप असल बच्चा प्रसारण संग प्रस्ट देखि, अलग कुरा हो, जो बच्चाहरु को लागि कथाहरू, आफ्नो व्यक्तित्व को गठन व्याख्या। यो विषय पनि छोटो कथा LVA Nikolaevicha Tolstogo जस्तै यो विधा प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
बच्चाहरु बारेमा र बच्चाहरु को लागि कथाहरू
लेखकले विशेष बच्चाहरु को लागि र आफूलाई बारेमा गद्य लाग्छ। ट्रिलजी "बाल्यकाल। किशोरावस्था। युवा "टोलस्टोय मानव व्यक्तिले आफ्नो वयस्क जीवनको प्रवेश जन्म देखि गठन गरिएको छ जसमा तरिका सिक्न प्रयासहरू सीमित छैन। कहानिहरु "तीन आकार", र आफ्नो सानो समस्याको लागि बच्चाहरु र दया प्रेम संग imbued संग्रह "नयाँ एबीसी", समावेश "गाई", "अंकल सिमोन जंगल मा उहाँलाई संग कुरा थियो।" एल एन को काम छोराछोरी मा धनी विचार Tolstogo।
कथा "Filippok" को निश्छल किसान छोराछोरीको लेखक को एक होसियार अवलोकन पछि जन्मेको र तिनीहरूलाई सँग कुराकानी भएको थियो। लियो आफ्नो सम्पत्ति पनि आफ्ना छोराछोरीको स्कूल खोलियो मा किसान को लागि समय सधैं थियो। आफ्नो मास्टर - र बच्चा गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो कथाहरू मध्ये एक, एक कुकुर Bulka, उनको nagging भक्ति मात्र घनिष्ठ सार एउटा सानो टुक्रा सकिन्छ। आफ्नो मृत्यु सम्म, उहाँले आफ्नो बाल्यकाल लेव टोलस्टोय आफ्नै सम्झे र पृथ्वीमा खुसी सबैले गर्न उहाँलाई मदत जो एक "हरे छडी", फेला पार्न चाहन्थे कि।
टोलस्टोय को कार्यहरूमा Fables र दन्तिये को एक ठाउँ
गद्य Ivana Andreevicha Krylova रूपमा हामी मूल भाषामा बाल्यकाल पाठ देखि सम्झना र moralizing Fables LVA Nikolaevicha Tolstogo, ठीक नैतिकता संग गर्भवती।
"ब्वाँसो र पुरानो मानिस।"
"सिंह र कुकुर।"
"क्रेन र सारस"।
"शिर र सर्प को पुच्छर।"
"कुकुर र यसको छाया।"
"बाँदर र मटर।"
"लोखर्के र ब्वाँसो।"
"लियो, एक गधा र स्याल।"
"सिंह र माउस"।
यो कि माथि हामी प्रेम गर्ने एल एन Tolstogo को ठूलो काम, भर्न प्रसिद्ध Fables मात्र एउटा सानो अंश हो। एक छोटो कथा मार्फत त्यो शायद मानिसहरूलाई बताउन सक्छ हाँसो, र उहाँलाई लागि यो अस्वीकार्य थियो: छल र धूर्त, अरुको अहित गर्ने इच्छा र घृणा, meanness र षड्यन्त्र। विरोध नै गुण कहिले काँही, असुरक्षित आक्रमण गर्न खुला आफ्नो गद्य देखाइएको थियो, र यो पनि अधिक राम्रो छ। टोलस्टोय कुनै ठाउँ खराब कार्यहरू, एक "राम्रो" र के "खराब" के व्याख्या गर्न किफायती र सजिलो आवश्यकता सफाइ छ, यदि उसले तिनीहरूलाई लागि थप लेखे बच्चाहरु र आफ्नो Fables लागि काम गर्दछ विश्वास गरे। र सधैं छोराछोरीलाई राम्रो स्मार्ट र असल नैतिकता वयस्क भन्दा सत्य धेरै नजिक छ बुझ्न विश्वास गरे।
प्रेम र कर्तव्य को टकराव - को वर्ण टोलस्टोय एक विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण
मुख्यतया यसको आफ्नै नैतिकता प्रतिबिम्बित "युद्ध र शान्ति", "अन्ना Karenina", आफ्नो कथा, Fables, दन्तिये र कथाहरू, - आफ्नो जीवन लियो टोलस्टोय लागि सिर्जना गर्ने प्रतिभा। उहाँले आफ्नो धार्मिक dogma, आफ्नो मानसिक Wandering कागज मा तल जन्माई र तिनीहरूको विश्वास शङ्का र तिनीहरूलाई sympathized गर्ने चरित्र दिन्छ। आफ्नो काम केही हास्य को पनि अलिकति अर्थमा, र कडाई प्रमाणित भएको थियो तिनीहरूलाई हरेक वाक्य हराइरहेको थियो मा, राम्ररी बाहिर लाग्यो। उहाँले अक्सर पहिले नै आफ्नो राय, वर्ण मा, आदर्श deducing, पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरिएको छ के rewrote।
उज्ज्वल व्यक्तित्व हामीलाई अघि किट्टी लागि आफ्नो agonizing प्रेम, र तिनीहरूको विश्वास तिर कर्तव्य एक अर्थमा संग "अन्ना Karenina" मा Konstantina: Lovina को छवि उत्पन्न हुन्छ। राजकुमारी Bolkonskaya - आफ्नो बुबाको ऋण लियो र जो Inimitable र "युद्ध र शान्ति" को राजसी प्रति Bezuhov, Nikolai Rostov, आफ्नो छुटकारा लागि आफ्नो पत्नी को दाइजो को एक मुद्रा लिएको होने। आफ्नो वर्ण को धेरै पीठो मार्फत जाने र वास्तविक कार्यहरू चाहनुहुन्छ। लेखक मनोवैज्ञानिक परीक्षण र प्रदर्शित पनि बलियो र आदर बढी योग्य मार्फत तिनीहरूलाई बित्दै। यो लेखक र आफ्नै संसार, उहाँले हामीलाई, र लियो टोलस्टोय बाँकी छ थियो। बच्चाहरु को काम - कथा, दन्तिये, Fables, वयस्क - उपन्यास, छोटो कथा, नाटक। तिनीहरूलाई उहाँले हामीलाई blizak र सडक दिनुभयो।
सुत्न, हर्कुलेसक्लस्टर! विश्लेषण कथा Saltykov- Shchedrina
Anton Pavlovich Chehov, "घोडा थर"। सारांश कथा
अलेक्जेन्डर Karasev: जीवनी र काम
मलम oflokainovaya: विवरण र निर्देशन
पुरुष र महिला जूता डर्बी (डर्बी): ग्राहक समीक्षा
बिजुली सुगन्ध दीपक - गृह लागि अपरिहार्य विशेषता
प्रेम, वा बालिका लागि एउटा प्रश्न को रहस्य कूल
Bavarian काँटाले बुन्नु: चार्ट, सिफारिसहरू, फोटो
Pola Negri: मौन फिलिम तारा को एक जीवनी
वर्ग3र4को लागि हंस मसीही एन्डरसन द्वारा दन्तिये सूची
भान्सा मा Gnats - यो प्रकोप छ! आफ्नो मलबे, माटो र पानी खुवाउन
मास्को विश्वविद्यालयहरु। मास्को अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय
सुविधा र छुट्टी fatherland डिफेन्डर दिन को इतिहास